अमारा क्यास्ट्रो सिड। यस र केकको लेखकसँगको अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: Amara Castro Cid वेबसाइट।
अमारा क्यास्ट्रो सिड, Vigo बाट, साहित्यिक संसारमा छोटो समय को लागी, तर पहिले नै आफ्नो हाल सम्म प्रकाशित उपन्यासहरु संग सफलता हासिल गरेको छ, पर्याप्त समय र यो यो र एक केक संग। यो मा साक्षात्कार उसले हामीलाई उनको बारेमा थोरै बताउँछ र धेरै धेरै। म तपाईंको समय र दयाको कदर गर्छु।
Amara Castro Cid - अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: तपाईंको पछिल्लो उपन्यास शीर्षक छ यो र एक केक संग। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
अमारा क्यास्ट्रो सीआईडी: यो र एक केक संग यो एक छ परिवार, मित्रता, प्रेम र सुधार को उपन्यास। यो एक युवती को कथा हो, मारियाना, जो आफ्नो जन्मभूमि भिगो फर्कन्छ को पछिबाट निको हुन दुर्घटना। उहाँका बुबा, उहाँका भाइहरू, उहाँका मनोवैज्ञानिक, उहाँका फिजियोथेरापिस्ट ... सबै निको पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण पात्रहरू हुनेछन्, शारीरिक मात्र होइन भावनात्मक पनि। अन्तर्निहित विषय शोक प्रक्रिया हो, तर यो एक सकारात्मक, कोमल पुस्तक हो जुन खुशी संग पढिन्छ र पाठकहरु को अनुसार, हुक अप सुरुबाट
विचार पग्लियो । मैले सधैं विशेष ध्यान दिएको छु प्रियजनको हानिले हामीलाई कसरी असर गर्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी सबैले कुनै न कुनै बिन्दुमा सामना गर्नुपर्नेछ र हामी तयार छैनौं। मेरो चिन्ता कागजमा राख्नको लागि ट्रिगर एक दिन थियो मैले एउटा गिलास भाँचें घरको भान्सामा। म उहाँलाई मन पराउँथे किनभने उहाँ मेरो सम्पूर्ण जीवन मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो, छ जनाको सेटको अन्तिम, एक बाँचेको जो मेरो अनाड़ीको कारण समाप्त भयो। मैले आफैंले टुक्राहरू उठाएर रद्दीटोकरीमा जम्मा गरेको देखेँ। मैले उहाँलाई कृतज्ञताका केही शब्दहरू समर्पित गरें, एक साधारण वस्तुको लागि सम्पूर्ण अन्त्येष्टि। तर यो गर्न राम्रो लाग्यो, यसले पीडा कम गर्यो। म उनको बारेमा सोच्न थाले पीडा जसले विदाईको कुनै सम्भावना नभएको बेला हानि उत्पन्न गर्दछ र त्यो क्षणमा उहाँ जन्मनुभयो यो र एक केक संग.
AMC: जब म सानो थिएँ धेरै पटक बिरामी र म ओछ्यानमा मेरो हातमा किताब लिएर सम्झन्छु जबसम्म मलाई सम्झन्छु। पहिले, म कथाहरूको संग्रहले मोहित भएँ, Miniclassics। त्यसपछि आयो माइकल एंडे को चरित्र संग जिम बटन। र पहिले नै निश्चित लम्बाइको पुस्तकको रूपमा, ओजको विजार्ड उसले ममा आफ्नो जादू चलाएको छ, मलाई मेरो बाँकी जीवनको लागि पढ्नको लागि स्वाद दिनुभयो।
मैले लेखेको पहिलो कथा मलाई याद छैन। बाल्यकालमा मलाई पहिले नै लेख्न मन पर्थ्यो र हरेक दिन यो गर्थे। म मेरो जीवनभर धेरै पटक घर र शहरबाट सरेको छु र मलाई थाहा छैन कि मैले मेरो बाल्यकालको नोटबुकहरू कहिले गुमाए। हालै मैले एउटा कथा भेट्टाएँ मिति संग डी 1984, अर्थात् मेरो ९ वर्षको । यो थप पनीर हुन सक्दैन। एक हजुरबुबाले आगोको न्यानोमा आफ्ना नातिनातिनाहरूलाई कथाहरू सुनाउनुभयो। झ्यालबाट हेरिरहेको एउटा बुरिटो, हजुरबुबाको काखमा एकदमै नरम बिरालो, र पक्कै पनि, दिउँसो चियाको लागि मफिन पकाउने मायालु हजुरआमा हराइरहेको थिएन।
AMC: लौरा एस्क्विभल द्वारा सूचीमा सधैं पहिलो छ चकलेट को लागी पानी, मेरो मनपर्ने उपन्यास; Isabel Allende, विशेष गरी उसको प्रारम्भिक कामहरू; रानी मणिका, उसले मलाई छोडेको छापको लागि भातकी आमा; सुसाना लोपेज रुबियो, जसलाई म सिफारिस गर्न कहिल्यै थाक्दैन; जुआन जोस मिलिज, मास्टर्स को मास्टर; क्रिस्टिना लोपेज बरियो, जसको साथ उनको कथा शैलीले मलाई कब्जा गर्छ; डोमिंगो भिलार, मेरो साथी मान्छे, एक उत्कृष्ट लेखक जसलाई म गहिरो प्रशंसा गर्छु; जोस लुइस मार्टिन भिगिल, मेरो युवावस्थालाई धेरै पाठकको रूपमा चिन्हित गरेकोमा; र म उल्लेख गर्न रोक्न चाहन्न एलोई मोरेनोउनको गीतका कारणले मात्र होइन, लेखनको सपना साकार पार्ने लगनशीलतामा पनि उहाँ मेरो बेन्चमार्क हुनुहुन्थ्यो ।
AMC: मलाई भेट्न मन लाग्छ तारा पश्चिम, लेखक र नायक एक शिक्षा. सम्मानको कुरा हुन्थ्यो जोन ब्राउन सिर्जना गर्नुहोस्, को माध्यमिक वर्ण चकलेट को लागी पानीलौरा एस्क्विभेल द्वारा।
AMC: म धेरै पागल हुन सक्दिन र सबैभन्दा खराब कुरा यो छ कि यो उमेर संग खराब हुन्छ। म पाठकहरू र लेखकहरूको सबै विशिष्ट उन्मादहरू सङ्कलन गर्छु, तर म तपाईंलाई अलि बढी व्यक्तिगत बताउनेछु। जब म लेख्छु मसँग टेबलमा प्राय: केहि प्लेमोबिल हुन्छ। धेरैजसो मैले काम गरिरहेको उपन्यासका पात्रहरू हुन्, तर मसँग अन्य दुई, क्रेट र साइप्रस, सम्भावित पाठकहरू पनि छन्। तिनीहरू बिना म फोकस गर्दैन। यदि कसैले मेरो जीवनलाई असम्भव बनाउन चाहन्छ भने, तिनीहरूले लुकाउनु पर्छ र तिनीहरूले युद्ध जितेका छन्।
AMC: मेरो लागि यो भन्दा राम्रो समय अरू छैन बिहान चार वा पाँच बजे, जब सबै चुप छ। त्यो मनमा राख्नुहोस् म एक पैदल यात्री सडकमा बस्छु, Vigo मा सबैभन्दा व्यावसायिक, र तपाईंको झ्यालमुनि ओपेरा गायकसँग ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो छैन र यदि उसले तपाईलाई शान्त क्षणको फाइदा लिन्छ भने, एक गिटारवादक, एक पाइपर वा गायक-गीतकार छिट्टै आउनेछ भनेर ढुक्क हुनुहोस्। यदि पूर्ण क्षमतामा डेसिबलको साथ कोही छैन भने, यसको कारण हो कि एक प्रदर्शन पास हुन लागेको छ, एक परेड वा यो क्रिसमस बत्तीको प्रकाशमा उपस्थित हुने समय हो। पुस्तकालयहरू मेरो शरणस्थान थिए, तर म मास्क लगाएर काम गर्न असमर्थ छु। म धेरै चाँडै फर्कने आशा गर्दछु।
र एक धेरै विशेष ठाउँ जहाँ मलाई लेख्न मन पर्छ मेरो आमाबुवाको घरको अन्न भण्डार। मैले यसलाई ग्रीष्मकालीन कार्यालयको रूपमा विनियोजन गरेको छु र यो लेख्नको लागि रमाइलो ठाउँ हो।
AMC: मलाई जान मन लाग्छ इन्टरलिभिङ विधाहरू मा पढ्ने। लेख्ने समयमा, प्रकाशनको विचारको साथ, म "जुता मेकर, तपाईंको जुत्ता" को कारणले मेरो लागि बढी वफादार छु, तर म दराजमा केही रहस्यहरू पनि राख्छु। कसलाई थाहा छ एक दिन...?
AMC: म पढ्दैछु हराएको बहिनी, को लुसिंडा रिले। यो गाथाको सातौं पुस्तक हो ती सात बहिनीहरू। मैले ती सबैलाई माया गरेको छु। मैले यो मेरो घाँटीमा गाँठो लिएर पढेको छु किनभने लेखकले क्यान्सरको कारणले यस वर्ष हामीलाई छोडे। एउटी युवती, एक शानदार क्यारियर र धेरै कुरा बताउन ... म विश्वास गर्न सक्दिन कि यो मैले लुसिंडा रिले द्वारा पढेको अन्तिम कथा हुनेछ, त्यसैले म बिस्तारै अघि बढ्न कोशिस गर्छु, म यो समाप्त हुन चाहन्न।
यो धेरै लामो समय भएको छ तेस्रो उपन्यास लेख्न थालेको छु। अहिलेको लागी म धेरै खुलासा गर्न सक्दिनम तपाईलाई मुख्य पात्रको नाम मात्र बताउछु रीता र यो पनि सेट गरिएको छ Galicia, मेरा अघिल्ला उपन्यासहरू जस्तै। एम धेरै उत्साहित यस परियोजनाको साथ, यद्यपि कहिलेकाहीँ म काममा नपुगेको विचारबाट प्रभावित हुन्छु, धेरै जसो किनकि म एक मानव हुँ र, जस्तै, मलाई अरू कसैलाई हुने सामान्य डर छ। सौभाग्य देखि, म हतार मा छैन। म प्रक्रियाको हरेक चरणको स्वाद लिइरहेको छु र म आफ्नै गतिमा हिड्न रमाईलो गर्छु।
AMC: को रूपमा सुरु गरें स्वयं प्रकाशित लेखक 2017 मा। म बुझ्छु कि महामारीले प्रकाशमा काम सुरु गर्ने यस तरीकाले धेरै वृद्धि गरेको छ, तर त्यस समयमा, हामी मध्ये धेरै थिएनौं र यो धेरै राम्रो भयो धन्यवाद। टाइटानिक प्रयास मैले के गर्न को लागी व्यवस्थापन गरे पदोन्नति। जे होस्, मलाई थाहा थियो कि यो बाटो म जान चाहँदैनथ्यो, र दोस्रो उपन्यास द्वारा, मसँग धेरै संयम थियो। माइवाले मेरो पाण्डुलिपि स्वीकृत गरेको दिन म यसलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको रूपमा सम्झिरहनेछु। अहिले म त्यहीँ छु जहाँ म हुन चाहन्छु। तपाईं थप माग्न सक्नुहुन्न।
AMC: मलाई लाग्छ, धेरै वा थोरै हदसम्म, हामी सबै फरक छौं, हामी महामारी भन्दा पहिले को थियौं। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई अझै पनि घर छोड्ने बानी बसाल्न गाह्रो लाग्छ। मानौं म अझै पनि मानसिक परिधि लकडाउनको एक बिटबाट पीडित छु, यो सबै मलाई अविश्वसनीय रूपमा टाढा देखिन्छ। र म बाहिर जान्छु, हो, तर म यो केहि प्रयास संग गर्छु। आँखाबाट आँसु नआएर समाचार कार्यक्रम हेर्न पनि नसक्ने भएको छु । मलाई लाग्छ यी सबैले भविष्यका कथाहरूमा आफ्नो छाप छोड्नेछ, यो अपरिहार्य छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » अमारा क्यास्ट्रो सिड। यस र केकको लेखकसँगको अन्तर्वार्ता